Applications sy ny fitaovana ho an'ny siansa izay miresaka ny fandinihana sy ny fampandrosoana ny ara-jeografika sarintany.
Ampitahao ny haben'ny firenena
Izahay dia mijery pejy iray tena mahaliana, antsoina hoe thetruesizeof, efa an-taonany maro no nidina an-tserasera izany ary tao anatin'izany - tamin'ny fomba tena nifandray sy nifandray - ny mpampiasa dia afaka manao fampitahana ny velarana anelanelan'ny firenena iray na maromaro. Azontsika antoka fa aorian'ny fampiasana an'ity fitaovana fampifandraisana ity dia hanana ...
EOS dia ahafahanao manatanteraka asa fanodinana sary ao amin'ny tranokala
Ny ankabeazan'ny asa famakafakana sary izay mitaky na ny rindrambaiko Erdas Imagine na ny ENVI dia eo amin'ny Internet ankehitriny noho ny EOS Platform. Ity serivisy cloud vaovao ity natombok'i EOS Data Analytics ho an'ireo matihanina GIS izay vahaolana feno amin'ny fikarohana, famakafakana, fitahirizana ary fampisehoana ny lehibe ...
Ny fahafahana maro amin'ny fampiharana ny GIS amin'ny Internet ankehitriny
Ny lohahevitra haneho hevitra anio dia ny GIS amin'ny Internet. Ho an'ireo 'tsy manam-pahaizana' dia azo adika fotsiny hoe 'GIS amin'ny Internet', fa inona no tena dikan'izany? Inona avy ireo sakany? Fa maninona izy io no 'manana fahafaha-manao fampiharana' araka izay voalaza ao amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity? Misy antony dimy ampiasain'i Eric van Rees ao ...
Takariva iny Scale
Ity dia lahatsoratra mahaliana iray nataon'i Regis Wellausen navoaka tao amin'ny MundoGEO Magazine, izay mampahatsiahy antsika ny tsy fiverenan'ireo fanambarana Catastro2014 natsangan'ny FIG roapolo taona lasa izay, indrindra mikasika ny maodely ho fanoloana ny sarimiaina nentim-paharazana. Ny tolo-kevitry ny famahana ny toerana hisolo ny paradigma fahanterana.…
Ny sarintany amin'ny Internet dia mamelombelona ny sarimiaina tantara
Angamba tsy nofinofisintsika mihitsy ny hahita indray andro ny sarintany manan-tantara, nitaingina an'i Google, hahafahantsika mahafantatra hoe tahaka ny ahoana ny tany misy antsika ankehitriny 300 taona lasa izay. Ny haitao momba ny sarintany an-tranonkala no namela azy. Ary mandehana! Ahoana. Ohatra iray amin'izany ny sarintany nostalgika any London, izay tsy vitan'izy ireo ...
Cartografia, jeospatial - GIS, Google Earth / Maps